ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကား Bluetooth ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်း အကြား
Bluetooth 5.0 လက်ခံနိုင်သောအိတ်ဆောင်အသံလွှင့်စက်ကိရိယာ (3DP) 3.5 မီလီမီတာ Jac နှင့်အတူ A2DP, Built-in Microphone, dual link)
Bluetooth 5.0 လက်ခံသူ, Bluetooth Aux adapter / အိတ်ဆောင်ကြိုးမဲ့အသံ, Microphone Microphone Dual link) 3.5 မီလီမီတာဂျက်နှင့်အတူ Plereo Hearphones စပီကာများနှင့်အတူ
Car Audio Bluetooth 5.0 ကြိုးမဲ့လက်ခံသူ adapter cable 3.5 MM Audio Audio Comeferizer
3.5 မီလီမီတာ jack acphone ကြိုးမဲ့ adapter အတွက် Earldom Bt 5.0 လက်ခံသူ Bt Aux audio Music Transmitter
3.5 မီလီမီတာဂျက် appo arphone ကြိုးမဲ့ adapter အတွက်လက်ခံသူ 5.5 ဒယ်ရှဲ aix audio Music Transmitter
Earldom အကောင်းဆုံး Bluetooth FM Transmit Display ကားအားသွင်းသူ adapter ကြိုးမဲ့ Bluetooth လက်ခံသူလက် - SD Company, SD Company - SD Company - Earldom,
ကား adapter အတွက် Bluetooth FM ထုတ်လွှင့်ခြင်း,& Bass အသံ Bluetooth ရေဒီယို transmitter ကား adapter
Car Adapter အတွက် Earldom အကောင်းဆုံး Bluetooth FM Transmitter, အားကောင်းတဲ့မိုက်ခရိုဖုန်း& Bass အသံ Bluetooth ရေဒီယို transmitution adapter ပေးသွင်းသူ, ထုတ်ကုန်များသည်ကြွယ်ဝပြီးကွဲပြားခြားနားသည်။
Earldom အကောင်းဆုံး Earldom M62 ရောင်စုံဝန်းကျင်နဲ့ LED အလင်းက MP3 Player ကို3ဆိပ်ကမ်း QC3.0 + PD ကို USB-C ကိုမြန်ဖုန်း FM ရေ transmitter မော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာစက်ရုံစျေး - Earldom, အဆိုပါထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကြွယ်ဝသောကွဲပြားခြားနားသည်။FM Transmitter Car Chargermulticolor ။ အနီရောင်, အစိမ်း, အပြာရောင်, လိမ္မော်, ခရမ်းရောင်, ရေခဲ, ရေခဲအပြာ, အဖြူ, static7အရောင်များ, ပြောင်းလဲနေသော7အရောင်များ။ ပြင်လက်စွပ်ပေါ်တွင်အလင်း switch ကိုဒီဇိုင်းကားများ၏အတွင်းပိုင်းအာကာသအသစ်တစ်ခုလေထုဖန်တီးပေးပါတယ်။2. Bl V5.0, အလိုအလျောက်ဆက်သွယ်မှု, အပြာ - သွားအကွာအဝေး5မီတာအထိ3. ကြည်လင်သောအသံအရည်အသွေး, တေးဂီတ, အညွှန်း, အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းများကိုနားထောင်ခြင်း
5-29 ကား Bluetooth M62 ။